कमालको एटीएम: ५०० रुपैयाँ झिक्न खोज्दा, २५०० रुपैयाँ आयो, निकाल्नेको लाग्यो लाइन
काठमाण्डौ । प्राविधिक गडबडीले कहिलेकाही नसोचेको घटना हुन पुग्छ । यस्तै घटना भारतमा भएको छ । भारतको महाराष्ट्र प्रान्तको नागपुरमा अचानक मानिसहरुको थामिनसक्नु भीड लाग्यो, कारण थियो त्यहाँको एउटा बैंकको एटीएम मसिनले मागेभन्दा ५ गुणा बढी पैसा दिनू । नागपुर जिल्लास्थित एक एटीएम मेसिनबाट एक व्यक्तिले रु. ५०० निकाल्न खोजे, तर ५००...
तपाइँ पनि कफीप्रेमी हुनुहुन्छ ? जान्नुहोस् ‘एस्प्रेसो मेसिन’को गडफादर को थिए ?
काठमाण्डौ । हरेक पटक गुगलले कुनै पनि चाडपर्व, वार्षिकोत्सव वा विशेष अवसरमा प्रसिद्ध व्यक्तिको सम्झनामा डुडल बनाउँछ। हालै गुगलले एउटा कलात्मक डुडल बनाएको छ । यसमा उसले आविष्कारक एन्जेलो मोरिओन्डो को १७१ औँ जन्मजयन्ती मनाएको छ। मोरिओन्डोलाई एस्प्रेसो मेसिनको गडफादर मानिन्छ। उनलाई सन् १८८४ मा पहिलो ज्ञात एस्प्रेसो मेसिन पेटेन्ट...
काठमाण्डौ । धैर्यवान लगानीकर्ताहरुका लागि सेयर बजार सम्भावना नै सम्भावनाले भरिएको उर्बर ठाउँ हो । स्वदेशी होस् या विदेशी सेयर बजार, बजारले कमाउने वातावरण सबैलाई दिएको हुन्छ । कहिलेकाही कतिपय कम्पनीको सेयर त लगानीकर्ताहरुको भाग्य परिवर्तन गर्ने गरी उदाइरहेका हुन्छन् । यस्तै एउटा पछिल्लो उदाहरण बनेको छ भारतको एउटा सानो कम्पनीको सेयर...
काठमाण्डौ । यतिबेला विश्वभरका देश अनियन्त्रित महँगीले आक्रान्त छन्। नेपाल, छिमेकी मुलुक भारत, अमेरिका, बेलायतलगायतका देशमा महँगी ह्वात्तै बढेको छ। मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न केही देशका केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाइरहेका छन्। लन्डनस्थित एक कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीमा महँगीको प्रभावलाई कम गर्न अनौठो तयारी अपनाउने भएको छ।...
काठमाण्डौ । विश्वमा सबैभन्दा लामो समय एउटै कम्पनीमा काम गर्ने कीर्तिमान एक वृद्धले बनाएका छन्। ब्राजिलमा बस्ने वाल्टर ओर्थम्यान १०० वर्षका भइसकेका छन्। उनले एउटै कम्पनीमा ८४ वर्ष काम गरे। यसका लागि उनको नाम गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डमा दर्ता भएको छ। ओर्थम्यानले भर्खरै गत हप्ता आफ्नो १०० औं जन्मदिन मनाएका छन्। ओर्थम्यानको जन्म १९...
काठमाण्डौ । कम्पनीहरुले आफ्ना कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न प्रकारका प्रोत्साहन दिन्छन्। यसमा सेयरमा बोनस दिनेजस्ता प्रचलन पनि छन्। कहिलेकाहीँ कतिपय कम्पनीहरुले कर्मचारीलाई उनीहरुको कडा परिश्रमको बदलामा महँगो उपहार पनि दिन्छन्। चेन्नईको आईटी कम्पनी किसफ्लो इंकले पनि यस्तै आश्चर्य उपहार दिएको छ। कम्पनीले गत हप्ता राम्रो...
काठमाण्डौ । तपाइँ आफ्नो नजिकको मित्रलाई उसको बिहेमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण के उपहार दिन सक्नुहुन्छ ? महँगीको यो अवस्थामा छिमेकी मुलुक भारतमा एक नवविवाहित जोडीलाई साथीहरुले पेट्रोल र डिजेल उपहार दिएका छन्। भारतमा यतिबेला तेलको मूल्यमा उछाल आएसँगै मानिसहरु विवाहजस्ता अवसरमा पेट्रोल–डिजेल उपहारका रुपमा दिन थालेको भारतीय मिडियाहरुले...
काठमाण्डौ । रक्तदानका लागि मानिसलाई प्रोत्साहित गर्न संसारभर विभिन्न अभियान सञ्चालन भइरहेका छन्। रक्तदानलाई महादान पनि भनिन्छ। किनकि यो धेरैको जीवन बचाउन सहयोगी साबित हुन्छ। यदि तपाइँलाई भनिन्छ कि तपाइँ रगत दान गरेर बिटक्वाइनमा ठूलो पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। सायद तपाइँ छक्क पर्न सक्नुहुन्छ। तर, रक्तदानका लागि जनचेतना जगाउने यस्तै...
बाइक किन्न बोरामा भरिएको सिक्का लिएर शोरुम पुगे एक युवक, पैसा गन्नमै बित्यो १० घन्टा
काठमाण्डौ । सामान्यतया कुनै ग्राहक गाडी खरिद गर्न आउँदा शोरुमका कर्मचारी खुसी हुने गर्छन्। तथापि कहिलेकाहीँ ग्राहकहरुले कर्मचारीहरुलाई समस्यामा पार्ने गर्छन्। भारतको तमिलनाडुमा समेत एउटा यस्तै घटना सार्वजनिक भएको छ। त्यहाँ एकजना ग्राहक आफ्नो मनपर्ने बाइक खरिद गर्न जाँदा शोरुमका कर्मचारीहरुको पसिना छुट्यो। २.६ लाख भारतीय...
काठमाण्डौ। रतन टाटा लाखौँका लागि प्रेरणाका स्रोत हुन्। उनका बारेमा नराम्रो सोच्ने मानिस कमै होलान्। रतन टाटाले भेदभाव नगरी आफ्ना लागि काम गर्ने सबै मानिसको ख्याल राख्छन्। टाटालाई सबैले ठूलो मन भएकोको मान्छे भनेर चिन्छन्। यो सामाजिक सञ्जालमा धेरै पटक प्रमाणित भएको छ। टाटा देशका थोरै व्यक्तिमध्ये एक हुन्, जसलाई सबैले सम्मान...
विश्वकै विशाल ‘रहस्यमय’ खाडल: जहाँ पाइन्छ बहुमूल्य हीरा, तान्छ उडिरहेको सबै वस्तु
काठमाण्डौ । राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनजस्तै रुस पनि रहस्यले भरिएको देश हो । पुटिनले रुसबाट आउने हरेक सूचनामा नजर राख्छन्। यही कारण हो कि मस्कोका अधिकांश गतिविधि रहस्यमय छन्। उदाहरणका लागि पूर्वी रुसको साइबेरिया क्षेत्रमा एउटा ‘क्वारी टाउन’ छ। यस प्रकारको यो सहर विश्वकै एकमात्र हो। आर्कटिक सर्कलबाट करिब ४५० किलोमिटर टाढा...
केवल ३ मिनेटको जुम कल, ८०० कर्मचारीको जागिर चट्
काठमाण्डौ । बेलायतको समुद्री जहाज सञ्चालन गर्ने कम्पनी पी एन्ड ओ फेरिजले ३ मिनेटको जुम कलमार्फत आफ्ना ८०० कर्मचारीलाई जागिरबाट निकालेको छ। केही महिनाअघि अमेरिकी कम्पनी बेटर डट कमले पनि जुम कलमार्फत ९०० कर्मचारीलाई जागिरबाट निकालेको थियो। यसरी नै ठूलो संख्यामा कर्मचारी निकाल्ने पी एन्ड ओ फेरिज दोस्रो कम्पनी बनेको छ। यो सिपिङ...
लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? यी ६ सूत्र अवश्य ध्यानमा राख्नुहोस्
काठमाण्डौ । तपाइँ आफ्नो लगानी यात्रा सुरु गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ ? अहिलेबाटै सुरु गर्नुहोस्। दिग्गज लगानीकर्ता वारेन बफेट पनि यही सिद्धान्तमा विश्वास गर्छन् र पछ्याउँछन्। यदि तपाइँले अहिलेसम्म लगानी गर्न सुरु गर्नुभएको छैन भने चिन्ता लिनुपर्ने कुरा छैन। लगानी पनि पढ्ने र सिक्नेजस्तै हो। जसका लागि कुनै उमेर हुँदैन। यदि तपाइँ...
पाँच वर्षपछि पृथ्वीमा खस्यो एलन मस्कको रकेट, आकाशमा उल्कापिण्डजस्तै वर्षा
काठमाण्डौ । विश्वका धनाढ्य एलन मस्कको कम्पनी स्पेसएक्सको रकेट झन्डै ५ वर्षको परिक्रमापछि अन्ततः पृथ्वीमा खसेको छ। मस्कको रकेट पृथ्वीको वायुमण्डलमा प्रवेश गर्नेबित्तिकै भग्नावशेषमा परिणत भएको छ। यो रकेटको भग्नावशेष ल्याटिन अमेरिकी देश मेक्सिकोमा खसेको थियो। यस क्रममा आकाशमा उल्कापिण्डको वर्षाजस्तो दृश्य देखिएको थियो। यो...
अर्बौं वर्ष पुरानो रहस्मय ‘कालो हीरा’ लिलामीमा, कति पाउला मूल्य ?
काठमाण्डौ । पृथ्वीमा फेला परेको सबैभन्दा ठूलो काटिएको हीरा मानिएको ‘कालो हीरा’ लिलाममार्फत बिक्रीमा राखिएको छ। अर्बौैं वर्षअघि बनेको यो रहस्मय हीराको नाम ‘द एनिग्मा’ दिइएको छ। यो रत्नको उत्पत्तिबारे विभिन्न मान्यताहरु छन्। तीमध्ये एउटाका अनुसार यो अन्तरिक्षबाट पृथ्वीमा आइपुगेको हो। यो हीरा ५५५.५५ क्यारेटको छ। जुन एकदमै...